I-Elmedia Player kunye neFolx Downloader echaphazelekayo yi-OSX / Proton Malware | Ndisuka mac
Kwiiveki ezidlulileyo sikuxelele ngobukho be-OSX / Proton malware kuhlaziyo lweBrakeBrake. Ngeli xesha ubukho bayo bufunyenwe kukhutshelo lwe-Elmedia Player kunye nenkqubo yokukhuphela yeFolx. Usulelo lwenzeka emva kwemini ye-Okthobha ye-19 ngexesha laseMelika. Iindaba zixelwa yinkampani yezokhuseleko ESET, epapashe ulwazi oluqokelelwe kwi Kwiwebhu kwaye yazisa ngokukhawuleza inkampani ekhupha i-installer. I-malware ikwifayile enye, njengoko sibonile kuhlobo lweBrakeBrake, kodwa ngeli xesha isebenzisa isazisi esisemthethweni ukuba nesatifikethi.
Igama le-ID yonjiniyela nguClifon Grimm. Nangona imvelaphi yesazisi isaphandwa, U-Apple wasirhoxisa kwangoko isiqinisekiso. Umyalezo we-ESET ulumkisa ukuba abasebenzisi abakhuphele kwaye bafake i-Elmedia Player kunye nezicelo zeFolx baya kusengozini enkulu. Uqhubeka esithi olona khetho lufanelekileyo lokuphelisa esi sisongelo, ngelishwa, faka inkqubo yokusebenza kwakhona ukusuka ekuqaleni.
Njengakuyo nayiphi na ingxaki kwiakhawunti yomlawuli, ukubuyiselwa ngokupheleleyo kwenkqubo yokusebenza kuphela kwendlela eqinisekileyo yokuphelisa i-malware. Amaxhoba kufuneka acinge ukuba iimfihlo zisenokuba zonakalisiwe kwaye zithathe amanyathelo afanelekileyo okuzenza zingasebenzi.
Ulwazi olunokufunyanwa ngulo "mhlobo wabanye" yidatha evela kwinkqubo yokusebenza, kubandakanya ulwazi oluvela kwinkqubo yokhuselo, ulwazi lwendawo, idatha yesikhangeli kubandakanya ikuki kunye nedatha yokungena, izipaji zekhompyuter idatha yabucala ye-SSH, idatha ye-MacOS Keychain, kunye nedatha ye-1Password kunye noluhlu lwezicelo ezifakiwe.
Ukuba unayo enye yezi fayile, Usenokuba ukhe wahlaselwa yi-OSX / Proton:
Nangona kunjalo, ngalo mzuzu ukukhutshelwa kwezi nkqubo zombini simahla kuzo zonke iintlobo ze-malware, ke ngoko, khuphela usetyenziso ngaphandle kokukhathazeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Elmedia Player kunye neFolx yokukhuphela echaphazelekayo yi-OSX / Proton malware
Molo, ukuba ndiqonda ngokuchanekileyo, ke abo bachaphazelekayo ngabo bafaka inkqubo ukusukela nge-19 ka-Okthobha?